Salon de l’Automobile any Genève Manintona olona ny Pal-V
Ity no tena hoe Fiara manidina. Aranty ao amin’ny salon de l’Automobile any Genève izay nanomboka omaly ny Pal-V. Fiarakodia misy kodiarana 3, afaka mandeha amin’ny arabe ary afaka manidina ihany koa.Vahaolana amin’ny fitohanan’ny fiara an-tanàn-dehibe izy ity raha araky ny filazan’ny mpamorona azy. Mahatody 1300 km ny Pal-V raha mandeha amin’ny arabe ary mahavita manidina amina halavirana 500 km kosa.1,5 miliara ariary novidin’ity Fiara manidina hafa kely ity.
Mila mailo amin’ny Sinoa ny Afrikanina
Firenena 4 aty Afrika no tsidihan’ny sekreteram-panjakana Amerikanina Rex Tillerson ka nanombohany izany omaly ny tao Addis Abeba renivohitr’i Etiopia izay misy ny foiben’ny vondrona Afrikana.Aoka ho mailo sy hitandrina momba ny fiaraha-miasa amin’ny Sinoa ny Afrikanina, hoy i Rex Tillerson satria fetsy ratsy izy ireo. Tsy mamorona asa betsaka eo amin’ny toerana izay hiasany akory ny Sinoa, hoy izy, tsy manofana tsara ireo olona eo an-toerana mba hahafahan’izy ireo mitondra ny anjara birikiny amin’ny fampandrosoana ilay faritra sy ny firenena. Tsy hanakana ny fahatongavan’ny mpampiasa vola Sinoa aty Afrika ny Amerikanina saingy miantso ny Afrikanina kosa mba handinika lalina tsara ireny fampiasam-bola sy tetikasa ataon’ny Sinoa ireny.
Taratasy nosoratan’i Albert Einstein
Nisy nividy 318 tapitrisa ariary
Nisy sahy nividy 103.700 dolara na 318 tapitrisa ariary mahery tao amina lavanty iray tany Jerosalema ny taratasy nosoratan’ilay manampahaizana momba ny fizika Albert Einstein. Ny taona 1928 no fantatra fa nosoratan’i Einstein ary nalefany ho ana mpiara-miasa iray aminy izay nipetraka tany Berlin io taratasy io. Resaka manodidina ny antsoina hoe “théorie de la gravitation” no voarakitra ao anatin’ity taratasy ity. Nampalaza an’i Albert Einstein izay nibata ny loka Nobel amin’ny Fizika ny taona 1921 moa ny “théorie de la relativité” izay nanazavany fa singa tsy azo sarahana ny fotoana sy ny tontolo .